Ubufakazi obufungelwe ngomgunyathi wokuqolwa komhlaba KwaZulu-Natal - Bayede News
Ukhala ngokuthathwa kwendawo yakubo eGroutville
Ubufakazi obufungelwe buveza umbimbi lwezisebenzi kanye namalungu ophakathi ekuwakweni kwemiphakathi yasemakhaya umhlaba
ISITATIMENDE esiyingxenye kafakazi wombuso ecaleni lenkohlakalo yezigidi zemali ngokuthengwa kwamapulazi KwaMgayi oGwini leKwaZulu-Natal siveza umbimbi lwenkohlakalo ethinta izisebenzi zeKhomishana ebhekelele ukubuyiswa komhlaba kanye namalungu etrust. Lokhu kulandela ukuputshuka kwesitatimende esibhalwe ngumphenyi weSpecial Investigating Unit (SIU) esidalula umkhonyovu oshaqisayo wokukhwabaniswa kwemali yoMnyango wakwaRural Development Land Claims Commision (RDLCC) engaphezulu kwezigidi ezingama-R50 okuthinta izikhulu nabasebenzi abathile balo Mnyango kanye namalungu eKwaMgai Community Trust (KMCT).
Lezi zigidi zemali okuthiwa zikhwatshanisiwe zazihlinzekwe nguMnyango ngenhloso yokuthengela umphakathi waKwaMgai ongabasuswa amapulazi kanti le mali izogcina idliwe zisebenzi ezithile zoMnyango zikwenza zihlangene namalungu eKMCT. Empeleni isililo ngamalungu eCommunity Property Associations (CPA), amalungu amatrust okuthiwa ahlangene kule nkohlakalo nezikhulu ezithile zekhomishana eyengamele ukubuyiswa komhlaba sikhona nxazonke KwaZulu-Natal.
IBAYEDE isibike kakhulu ngokudlanga kwalo mkhonyovu obonakala ulufenyisa uhlelo lukaHulumeni lokubuyisela imiphakathi yaboHlanga imihlaba yabo eyayithathwe ngenkani kubo nguHulumeni wamaKoloni nowobandlululo. IBAYEDE inayo ikhophi yalesi sitatimende somphenyi weSIU, uMnu uJames Cyril Garvin esigeqa amagula ngokuhlelwa kwale nkohlakalo ethinta izisebenzi zoMnyango namalungu etrust. Ngokwalesi sitatimende somphenyi weSIU, uMnu uJames Cyril Garvin esiyingxenye yobufakazi bombuso siveza ukuthi uMnyango wakwaRDLCC ukhwatshaniselwe imali eyizi-R45 015 000.00 okwakuyimali okwakuthiwe izothengela umphakathi wakwaMgai iBeneeva Farm kanye nezi-R10 413 750 00 okwakuthiwe izosentshenziselwa ukuvuselela amapulazi ayesekhahlazekile ngoba engasanakiwe.
Ngokwamaphepha iBeneeva Farm ithengwe ngowezi-2008. Okunye okuqukethwe yisitatimende sikaMnu Garvin sidalula ukuthi isisebenzi sakwaRDLCC, uMnu uSandile Dlamini owayesebenza njengeProject Manager eMgungundlovu zagunyaza amatrust amabili angefani ukufuna ipulazi elilodwa. Itrust yesibili ibizwa ngeKwaShozi Community Trust (KSCT).
Isitatimende sikaGarvin siphinde sidalula ukuthi kwasayona iKMCT ayigunyaziwe yiMaster of the High Court yize kodwa kunencwadi enesigxivizo sakhona okungaziwa ukuthi satholakala kanjani. Usihlalo weKMCT nguMnu uShaka Msani ongasekho emhlabeni. Kulesi sitatimende kuphinde kuvele futhi ukuthi kwasayona le KMCT ibihlukene kabili kodwa usihlalo wayo kusenguMsani. Okugqamayo ukuthi kweyokuqala iKMCT ibinamalungu ayisi-6 kuthi eyesibili ibe namalungu ayisi-8.
Akugcini lapho njengoba lesi sitatimende seSIU siphinde sidalule nokuthi izikhulu zakwaRDLCC eMgungundlovu ohlwini lwabantu ababefake izicelo zokubuyiselwa umhlaba zifake nenqwaba yamagama abantu okungesibo abasuswa okuthiwa abayizipoki kwathi abantu abangabasuswa bangempela bona basala ngaphandle. Ngokwesitatimende sikaGarvin uthi uqale lolu phenyo ngalo mkhonyovu wokudliwa kwemali kaHulumeni ngomhla ziyisi-8 kuMandulo ngowezi-2012 ngemuva kokuthi isikhulu saKwaZulu-Natal Rural Land Claims Commissioner, u-Advocate Bheki Mbili evule icala lenkohlakalo emaphoyiseni.
Esitatimendeni sakhe, uGarvin kuphinde kuvele nokuthi kukokotelwe izincwadi ezimbili ezinesigxivizo sakwaMaster of the High Court eziqinisekisa ukugcotshwa kwamakomiti eTrust yomphakathi. Nezincwadi zeDeeds of Trust kuvela ukuthi nazo ngezomgunyathi. “Ngajutswa ukuphenya mayelana nezinsolo zenkohlakalo ekuthengweni kwepulazi elinguPortion2 eliyingxenye yepulazi iBeneeva elingunombolo 17466. Leli pulazi elingamahektha ayi-1660, 1612. Inombolo yalo yeDeeds of Transfer nguT000817/09,” kusho uGarvin.
UGarvin uthi lezi zinsolo ayeziphenya ngepulazi, iBeneeva zimayelana nalokhu okulandelayo: “Inkohlakalo ngokuthengwa kwalo lithengelwa amatrust amabili okuyiKwaMgai Community Trust, elingunombolo IT1352/2008/PMB Mgai Trust kanye neKwaShozi Community Trust, engunombolo IT 1232/2008/PMB,” kufundeka isitatimende sikaGarvin.
Isitatimende sikaGarvin siphinde siveze nokuthi kwaba khona ukungaziphathi kahle kwezikhulu ezithile zomnyango okubalwa noMnu Sandile Dlamini okuthiwa babamba iqhaza elikhulu ekwenziweni kwalo mkhonyovu. “Bathumela izicelo zokubuyiselwa umhlaba zomkokotelo kanye nokwakhiwa kwekomiti letrust yomphakathi elingekho emthethweni okwakuyiKwaMgai Community Trust. Baphinde benza izincwadi zeDeeds of Trust zomgunyathi kwaba sengathi zikhishwe yiHhovisi leMaster of the High Court ezasentshenziselwa ukusungulwa kweKwaMgai Community Trust. Kanye nokukhokhelwa kwezipoki kanye nokuntshontshwa kwemali yomphakathi ngabantu ababezibiza ngamalungu etrust,” kuqhuba isitatimende sikaGarvin.
Uthi ophenyweni lwakhe wathola ukuthi umnikazi wepulazi ngaphambilini ebelaziwa ngokuthi uMoba Farms (PTY) Ltd walidayisela uMnyango ngenhloso yokulithengela umphakathi waKwaMgai Community Trust neKwaShozi Community Trust. Ngokwalesi sitatimende sikaGarvin siveza ukuthi ngaphansi kweKwaShozi Community Trust bangama-58 abantu abafaka izizcelo zokubuiyiselwa umhlaba bese kuthi ngaphansi kweKwaMgai Community Trust bali-180.
“Inani lemali yepulazi yayiyizi-R45 015 000.00 nokuthi izicelo zokubuyiselwa umhlaba zala matrust omabili zasezifakiwe eHhovisi laKwaMaster of the High Court. Isivumelwano sokudayiselana saphothulwa ngomhla zingama-24 kuNhlangulana wezi-2008. Nokwakuyimali eyizi-R45 015 000.00 kanye nezi-R10 413 750-00 yokuthuthukisa lawo mapulazi ayesekhahlazekile ngenxa yokunganakwanga,” kufundeka isitatimende sikaGarvin.
Isitatimende sikaGarvin siphinde sidalule ukuthi kuthe uMnyango usukhokhele umnikazi wepulazi isamba sakhe ipulazi iBenneva labe seledluliselwa ngaphansi kweKwaMgai Community Trust neKwaShozi Community Trust ngomhla zingama-24 kuMasingana wezi-2009. “Ophenyweni lwami ngokuthengwa kwaleli pulazi ngithole ukuthi muningi umkhonyovu owenziwe ekuthengweni kwalo kanjalo nasekwedluliselweni ngaphansi KwaMgai CommunityTrust neKwaShozi CommunityTrust. Ngithole okungelona iqiniso ngohlu lwabantu ababefake izicelo zokubuyiselwa umhlaba kanye nokungalandelwa kohlelo olusemthethweni lokufakwa kwezicelo. Ukulethwa kwezincwadi zomkhonyovu zokugunyazwa kwetrust ikakhulukazi iKwaMgai Community Trust. Kanye nokuntshontshwa kwemali yetrust ngababezibiza ngamalungu etrust kanye nezipoki,” kuqhuba isitatimende sikaGarvin.
Uphinde adalule nokuthi noMnu uSifiso Ndlovu ongumeluleki woMnyango kwezomthetho naye wakucacisa ukuthi kuningi okungahanjiswanga kahle ngesikhathi kufakwa izicelo zokubuyiselwa umhlaba okubalwa nokuthi ukwakhiwa kweKwaMgai Community Trust akuhanjiswanga kahle nokuthi ayigunyaziwe yiMaster of the High Court.
“Isikhulu sakwaRDLCC (okungu-Advocate Bheki Mbili oyiKwaZulu-Natal Land Claims Commissioner) asibandakanyangwa ekwakhiwe kweKwaMgai CommunityTrust nokwakuphambene nenqubo yoMnyango,” kuqhuba uGarvin.
Uthi uMnu Ndlovu wakucacisa ukuthi ngokwenqubo yoMnyango ngu-Advocate uMbili olungisa amaphepha okuthengwa komhlaba noma amapulazi. Lawo maphepha athunyelelwa eHhovisi likaMaster of the High Court, aphinde futhi elekelele ekukhethweni kwamalungu etrust yomphakathi. “Ngakho ukungabandakanyeki kwakhe KwaMgai Community Trust kuphambene kakhulu nomthetho futhi kushayisana nenqubomgomo yoMnyango. Futhi akukho ncwadi eyaphuma kwaMaster of the High Court egunyaza ukuqokwa kweKwaMgai Community Trust kodwa lezi zincwadi zomgunyathi zathunyelwa nguMnu uSandile Dlamini oqashwe nguMnyango,” kuqhuba isitatimende sikaGarvin.
UMnu uGarvin uphinde athi uNdlovu wayichitha nenkampani yabameli eyayisebenza izindaba zokuthengiselana ngomhlaba futhi eyayigcine nezimali zeKwaMgai Trust okuyi-Alexenders Incorporated. Uthi uGarvin wathi le nkampani yabameli akwaziwa ukuthi yaqokwa kanjani ngoba ayikho nasohlwini lwezinkampani zabameli ezisentshenziswa nguMnyango.
UGarvin uthi kahle kahle ngumsebenzi woMnyango, uNks uRuth Xulu owabhadama lo mkhonyovu wezincwadi ezimbili ezingefani ezazinesigxivizo sakwaMaster of the High Court zamalungu eKMCT ezazivela kuDlamini kanye noNks uNtombifikile Lorraine Hlengwa owayengunobhala weKMCT. “Kuthe uma ebona lo mkhonyovu wabikela umphathi u-Advovate uMbili naye udaba walubika emaphoyiseni ukuba luphenywe,” kuqhuba isitatimende sikaGarvin.
UGarvin uphinde wadalula nokuthi kunabantu abane ababhala izitatimende ezifungelwe bephika ukuthi bake bafaka izicelo zokubuyiselwa umhlaba endaweni yaKwaMgai yize amagama abo esohlwini lwabantu ababefake izicelo zokubuyiselwa umhlaba. IBAYEDE inawo amakhophi ezitatimende zabo. Okhulumela ikomiti lomphakathi wakwaMgai, uMsani uthi kumanje bakhathazekile bengumphakathi ngoba necala okufanele ngabe seziboshiwe izigebengu ezithinteka ekudliweni kwemali yomphakathi libanjezelwa yizikhulu zakhona futhi emnyangweni.
“Ngemuva kokuvela kwalezi zinsolo zomkhonyovu othinta ezinye zezikhulu zoMnyango, uMbili wavula icala ukuba ziphenywe lezi zinsolo,” kusho uMsani. “Kumanje leli cala elivulwe nguMbili libambezelekile eNkantolo Enkulu eMgungundlovu ngenxa yokuthi aboMnyango bayabaleka ukuselekelela ekutheni siqoke ikomiti elisemthethweni leKwaMgai Trust ngoba leli elidala ebeliholwa nguMsani lihlakaziwe ngenxa yokuthi kwatholakala ukuthi kwakungelo mkhonyovu njengoba lalingagunyaziwe yiMaster of the High Court.”
UBheki Msani uthi ngonyaka owedlule iNkantolo iyalele lezi zikhulu zoMnyango ukuba zelekelele umphakathi wakwaMgai ekutheni liqoke ikomiti letrust elisemthethweni nokuthi kwenziwe kabusha uhlelo lokuhlonzwa kwabantu abangabasuswa ukuze icala likwazi ukuqala enkantolo. “UMbili wathi nakanjani ngeke iphele inyanga kalwezi lingaqokiwe ikomiti elisha futhi lungenziwe uhlelo lokuhlonzwa kwabasuswa. Okusiphatha kabuhlungu ukuthi uze washaya yedlula inyanga kaLwezi engakwenzile lokho. UMnyango ube usucela iNkantolo ukuba udaba uluhlehlisele mhla zingama-27 kuMasingana wezi-2017 obekunguLwesihlanu olwedlule,” kusho uBheki Msani. Uthi badumele futhi betshelwa ukuthi icala seliphinde lahlehlela izinyanga ezintathu ngoba uMnyango uthi ucela elinye ithuba.
“Kunenkampani ezimele eyaqokwa nguMbili ukuba yelekelele uMnyango ekwenzeni okwakushiwo yinkantolo. UNks uThandi Ngcobo wale nkampani ukhala ngoMbili ukuthi uyambalekela akafuni ukuzothatha umbiko ngasebekwenzile njengoba kade baqeda ukuyohlonza abasuswa. Osekusele ukuqokwa kwekomiti elisha lomphakathi.” UBheki Msani uthi uNks uNgcobo ngoLwesithathu umtshele ukuthi kwakumele bahlangane noMbili emasontweni amabili kodwa kwathiwa akekho usemhlanganweni ePretoria akamzame ngoLwesine olwedlule nokuthe ethi uyamzama kwathiwa akekho eHhovisi.
“Uma ngithinta uMbili ngoLwesithathu yena athi asibuze kuNks uNgcobo ngoba nguye obambezele izinto yena kade emlindele nombiko,” kuqhuba uBheki Msani othi enye inkinga ebhekene noNks uNgcobo ukuthi ufuna uMbili azocacisa njengoba ezinye izikhulu zeHhovisi lakhe eMgungundlovu sezithe ipulazi elingunombolo 19 alikho ngaphansi kweKMCT. “Sesiyasola ukuthi aboMnyango babambezela ngamabomu ukuvikela abathile abathintekayo nokuzogcina nenkantolo leli cala isilikhiphile ohlwini lwamacala. Manje ingakho sifuna uNgqongqoshe uGugile Nkwinti noNks uNomfundo Gobodo ukuba bangenelele ngokushesha kungaze konakale icala,” kuphetha uBheki Msani.
UMnu uMakhosana Msani oyindodana kamufi uShaka Msani ukuqinisekisile ukuthi yena namalungu ekomiti elidala elaliholwa nguyise sebanikezwa amasamaniso ababizela enkantolo ukuba bazophendula ngalezi zinsolo. “Manje siyaxakeka ukuthi asibizwa ngani eNkantolo ukuze sizoziphendulela ngoba mina ngiyoyitshela inkantolo ukuthi ubaba wayehlangene nezikhulu zomnyango ekudliweni kwale mali.”
Kuphambana ukukhuluma ezitatimendini ezifungelwe
ELABOHLANGA linohlu lwamagama abantu abafakwe njengamalungu etrust nokho abanye baphika bama ngentaba ukuthi bangamalungu. Amanye alamagama nguNks uBrenda Pamela Mkhwanazi, uNks uZinhle Purity Sibiya, uNks uBusisiwe Msani bobathathu abangaphansi kweKwaShozi Community Trust. Ebese kuba nguMnu Slindokuhle Comfort Majola yena ongaphansi kweKwaMgai Comunity Trust .
Esitatimendeni esifungelwe sikaNks uMkhwanazi ohlala ePhayindane uthi yena akakaze afake isicelo sokubuyiselwa umhlaba kwaMgai. UNks uMkhwanazi uphinde wathi yena akakaze afake igama lakhe ohlwini lwabantu ababefake izicelo zokubuyiselwa umhlaba.
UNks uSibiya yena uhlala eGlen Anil eThekwini kanti usebenza eMnyangweni Wezemfundo uthi uyamangala ukuthi sangena kanjani isicelo sakhe sokufuna ukubuyiselwa umhlaba kwaMgai ngoba yena wayesifake eStanger.
Ephawula ngalokhu uMnu uJames Garvin weSIU emaphepheni afungelwe asenkantolo uthi: “Kunokushayisana phakathi kwesitatimendeni sikaNks uSibiya sangomhla zili-15 kuNcwaba wezi-2013 kanye nencwadi ebhalwe ngomhla zingama-21 kuNcwaba wezi-2013. Njengoba ethi esakhe isicelo wayesifake eStanger kodwa ngokwesitatimende sangomhla zingama-21 kuNcwaba wezi-2013 sithi wafaka isicelo sakhe KwaMgai lokhu okushayisanayo futhi okungahambisani. Ngaleyo ndlela wayengeke abe ngofanele ukufaka iscelo KwaMgai,” kufundeka isitatimende somphenyi weSIU.
NoNks uMajola yena ohlala eMontclair esitatimendeni sakhe uyazihlangula ekutheni wake wafaka isicelo sokubuyiselwa umhlaba waKwaMgai. UNks uMajola uphinde athi yena akakaze ahlale noma asebenzele KwaMgai nokuthi akakaze ahlomule ezinxephezelweni.
UGarvin uyaphawula nangezincwadi zomgunyathi zaseHhovisi likaMaster of the High Court ezimayelana noMgai Trust nokuvela ukuthi izinombolo zakhona zazingafani yize zazikhuluma ngeTrust eyodwa.
“Amagama emibhalo yazo lezi zincwadi ayengafani njengoba kwenye amagama emibhalo ayemakhulu kanti kwenye emancane,” kuqhuba isitatimende. Siphinde sithi okunye abona ngakho ukuthi lezi zincwadi ngezomgunyathi ukuthi negama lesifundadolobha saseMgungundlovu sibhalwe ngokungeyikho kwenye njengoba kwenye kwakubhalwe ukuthi Pietamaritzburg kweye kubhalwe uPietermaritzburg.
UGarvin uthi lokhu ayekubalulile ngalezi zincwadi kwaqinisekiswa nayiHhovisi likaMaster of the High Court.
“Nesitatimende esathathwa kuMaster of the High Court, uSeetaram Gangai siyakuqinisekisa ukuthi awekho amarekhodi eHhovisi lakwaMaster of the High Court aqinisekisa ukuthi uMgai Trust wayebhaliswe ngokusemthethweni,” kusho uGarvin.
Okunye okuphawulekayo wukuthi isigxivizo saKwaMaster of the High Court kulezi zincwadi kwakungesomkokotelo. Kanti odabeni loMgai Deeds of Trust ebhalwe umhla zingama-24 kuNcwaba wezi-2013 naleyo ebhalwe mhla zili-11 kuNhlangulana wezi-2013 anezibalo zamalungu eTrust ezingalingani kodwa ezinosihlalo oyedwa okunguMnu uShaka Msani.
“Ngaphinde ngabona okungahambi kahle mayelana nesivumelwano sokudayiselana ngepulazi likamoba iBeneeva phakathi komnikazi walo neMgai Trust,” kuqhuba isitatimende.
UGarvin uthi ngokwalesi sivumelwano umnikazi wepulazi iBeneeva yize wayesekhokheliwe kodwa usazoqhubeka ahlomule ngenzuzo yesivuno sikamoba otshalwe kulo. Nokuthiwa kuzomele imali yokuwaqasha kubammeli bakwa-Alexender Incoporated bona bese bekhokhela iKwaMgai Community Trust.
“Kodwa kwavela ukuthi ngomhla zingama-30 kuMfumfu wezi-2010 le mali yokuqashisa ngeBeneeva Farm yayingena ku-akhawunti kaMnu uShaka Msani owayengusihlalo weTrust,” kufundeka isitatimende sikaGarvin oqhuba athi le mali ebifakwa ngokungemthetho ku-akhawunti kaMsani iqhubeke kwaze kwaba ngumhla ziyisi-6 kuNhlolanja ngowe-2013.
“U-Advocate uMbili wabe eseyalela inkampani yabameli i-Alexender Incoporated ukuba iyibuyise le mali obekuthiwe ifakwa esikhwameni saKwaMgai Community Trust kuze kube kulungiswa izinkinga ngamaphepha oMgai Community Trust,” kuqhuba uGarvin.
Uqhuba uthi okunye akuthola ophenyweni lwakhe ukuthi ngomhla zingama-25 kuNcwaba wezi-2009 kuya mhla zingama-22 kuNdasa wezi-2012 kunemali eyizi-R847 500.00 eyakhokhelwa amalungu eTrust. Nokuthi ngomhla zingama-31 kuNcwaba wezi-2009 kuze kube ngumhla zili-19 kuMbasa wezi-2010 kunesheke lezi-R444 000.00 elashintshwa.
“Futhi kunemali eyizi-R10 000.00 eyafakwa ku-akhawunti kaMnu uSandile Dlamini ngomhla zingama-31 kuNcwaba wezi-2009. Yize ingaveli imininingwane yomuntu owayifaka kodwa inombolo yocingo ebhalwe esitatimendeni sasebhange kwakungekaShaka Msani,” kuqhuba uGarvin esitatimendini sakhe.
UDlamini wayeqashwe nguMnyango njengeProject Manager kanti futhi nguye okhonjwa kakhulu ngomunwe kule nkohlakalo.
UGarvin uthi uphinde wathola ukuthi ngomhla zili-15 kuMfumfu wezi-2013, uMnu uDlamini wesulile emsebenzini. Nokuthi uShaka Msani washona ngomhla zi-3 kuZibandlela wezi-2013.
“Kuyacaca ukuthi ipulazi iBeneeva latholakala ngobugebengu njengoba uMnyango iRDLCC owenza isivumelwano sokulithengela abaKwaMgai Trust wasenza kanye kanye nesaKwaShozi Trust. Nokuthi izincwadi ezahanjiswa eMnyangweni zohlu lwabantu ababefake izicelo zokubuyiselwa umhlaba kwakungezomgunyathi, oholele ekutheni uMnyango uchithe izi-R45 015 000.00 uthi uthengela umphakathi wakwaMgai amapulazi,” kuphetha isitatimende sikaGarvin.
nguMandla Zulu Feb 2, 2017